Fikarohan’ny MBG : zavamaniry miatrika toetr’andro sy toe-tany | NewsMada
Nanafika sady nitifitra olona teny Ambohitrimanjaka: jiolahy roa lavon’ny zandary, iray azo sambo-belona
Indice de perception de la corruption: Madagascar stagne dans le classement
Rindrim-bato nirotsaka tetsy Ankadifotsy: Anisan’ireo olona fito namoy ny ainy ireo zaza 6 sy 10 taona
Ankadifotsy: une famille décimée suite à un affaissement de terrain
Mavesatra ny takaitra navelan’ilay andro ratsy…: 26 ireo namoy ny ainy, 47.000 mahery traboina
Les gouvernement sur tous les fronts: 24 morts et 47.261 sinistrés, après le passage d’Ana
Raharaha tsatoka antsy, tetsy Ivandry…: nidoboka eny Tsiafahy ilay vazaha, Loïc Large
Remblayage à Tana: l’autorisation suspendue depuis janvier 2020
Ady tany eo amin’ny samy mpihavana: lehilahy iray maty voatsatoka antsy, olona 8 voasambotra
Intempéries: le président au chevet des sinistrés
Fikarohan’ny MBG : zavamaniry miatrika toetr’andro sy toe-tany
Par Taratra sur 05/01/2016
Hafanana migaingaina, tany mitresaka, hamandoana be loatra, tany masira, rivo-mahery, afo . Tsy afa-miala amin’ireny ny zavamaniry noho izy ireo mifikitra amin’ny fakany. Manao ahoana ny fiainan’izy ireny manoloana ny toetr’andro sy toe-tany maro isan-karazany ?
Endrika samihafa entin’ny zavamaniry miatrika ireo fahasarotana ireo, araka ny fikarohana nataon’ny Missouri Botanical Garden (MBG). Ohatra : misy tsy mipoitra ety ambonin’ny tany, miendrika voa madinika toy ny pika ; ao ny manana ravina mivangongo toy ny raozy kely miady amin’ny rivotra ; misy ny zavamaniry sasany, toy ny vahona, manangona rano amin’ny raviny sy ny tahony ; ny hafa mivelona amin’ny bibikely, toy ny tsimahatanando ; ny voahirana kosa, ny ravina mitsingevana anaty rano no hitehirizany rivotra entiny miaina. Ireo any amin’ny tany mando indray, manana ravina lehibe toy ny akondro sy ny ravinala ary ny vatany ambany, afaka miady amin’ny hamandoana be loatra.
Mihakely sady mihamafy toy ny an’ny tapia ny ravin’ireo zavamaniry amin’ny faritra somary maina. Rehefa tena maina ny toerany, mitahiry rano anaty ravina ny sodifafana, anaty taho ny reniala ary amin’ny faka ny oviala. Misy amin’ireo mampihena ny fahaverezan-drano amin’ny fihintsanan’ny raviny amin’ny andro ririnina. Ao indray ireo Manana faka lalina sady kely, miendrika tsilo mihitsy ny raviny, afaka miaina any amin’ny tany ngazana toy ny fantsilotra. Ohatra amin’ny fahasamihafam-piainan’ny zavamaniry sasan-tsany ireo, araka ny maha zavaboary azy. Koa tokony hotandrovana fa antoky ny fahaveloman’ny hafa, anisan’izany ny olombelona.
Toetr’andro: hiverina ho maina ny andro manomboka anio 26/01/2022
Fihotsahan’ny tany: 10% amin’ny tokantrano 1 583 no efa niala 26/01/2022
MJS sy ny Kom : hisitraka tetibola ireo federasiona amin’ny JIOI 26/01/2022
Fanapahan-kevitry ny minisitera: noesorina ireo mpiasan’ny Tafita miisa 40 26/01/2022
Fialana amin’ny fandraikiraikena,…: hitondra fampiofanana i Rastamikalo 26/01/2022